Harurwa: Chema nekunakirwa | Kwayedza
Vogara nguva pfupi mu‘quarantine’
VANHU vari kuchengetwa munzvimbo dzakasiyana dzenyika vachiongororwa utano hwavo nechinangwa chekuti vaonekwe kuti ...
Harurwa: Chema nekunakirwa
09 Nov, 2018 - 00:11	 2018-11-08T13:09:15+00:00 2018-11-09T00:01:56+00:00 0 Views
HARURWA — twupukanana twunorarama nemashizha emiti sezvinongoita hwiza kana kuti mhashu — kudya kunovaka muviri sezvo kuine maprotein uye vamwe vanoti dzinorapa zvirwere zvakaita seBp, shuga kana mhezi.
Svondo rino Mbuya Margaret Muganyi vekuBikita, kuMasvingo, vanorondedzera mamwe mabikirwo eharurwa idzo dzavanoti dzinonyautsa mukanwa zvikuru.
Harurwa, chikari, munyu, mafuta nechipunu
Geza harurwa woisa mafuta mashoma muchikari.
Gadza pamoto ukange wozoisa munyu wakaringana.
Dzikange kusvika dzatsvukirira.
Bura udziyanike pazuva.
Usakanganwe kusarudza dzimwe dziya dzinovava zvekuchemedza zvekuti unotobuda misodzi pakudzidya. Ndidzo dzinonzi fuve. Fuve ndoharurwa dzine rurava rutema. Harurwa dzinodyiwa dzakadaro kana nesadza remhunga, rezviyo kana rechibage.Harurwa kudya kweparwendo uye hadziwori zvekuti dzinogona kugara kwegore rose kana dzichinge dzaomeswa zvakanaka.
. Sunungukai kutumira zvamunoda kuti zvibude pachirongwa chino panhamba dzinoti: +263 713 411 281
Mufushwa wemunyemba22 Nov, 2019
Makwikwi eAfrican Woman of the Year22 Nov, 2019
Kukaringa howa zvemandorokwati22 Oct, 2019
‘Musanyeberwe, hakuna muteuro unorapa Covid’
Akatsemura mwana musoro adya dovi
Harare: Mwongo weCovid muZim
Ndabatwa nemweya wetsvina: Mbavha
Vanamukoti 13 vakasungwa
‘Covid-19 yaondonga mutambo wenetball’